Thet Naing Swe (16/12/50033)
ပိန်ပါးသူတွေကလည်း ဝချင်တယ် ဝတယ်လို ့ထင်သူတွေကလည်း ပိန်ချင်တယ် ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြင့် အဓိကအချက်ကတော့ ကျန်းမာဖို ့ပါ ။
ပိန်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဝတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အစားအသောက် ပြု ့မှု ့နေထိုင်ခြင်းတွေကို သတိမမှု ့မိပါက ရောဂါဆိုတာ ဖြစ်တက်ပါတယ် ။ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ ရင်သားကင်ဆာ ၊ အူမကြီးကင်ဆာ ၊ လေဖြတ်ခြင်းရောဂါ နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ တစ်ချို ့ဖြစ်တက်ပါသည် ။
မိမိခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအရ ညီမျှသော ကိုယ်အလေးချိန်ရှိတက်ပေမဲ့ အထိုင်များခြင်းကြောင့် ကိုယ့်အလေးချိန်တက်တက်ကြပါသည် ။
တစ်ချို ့ဆို အဝလွန်ခြင်း Obesity ဖြစ်နေပါက သွားလာမကောင်းလေးလံနေခြင်း နှင့် အတူ ဒူးဆစ် ခြေဆစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်ဝေဒနာများ ခံစားဖြစ်ပေါ်တက်ပါသည် ( ဝလို ့အဲလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး စိတ်မှာစွဲလန်းစိတ် ဖြစ်ရန်လည်း မလိုအပ်ပါ ) အဲလို ဖြစ်ရခြင်းသည် ကိုယ်အလေးချိန် အလွန်များပြား ခန္ဓာကိုယ် ဝိတ်ဖိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
မည်သို ့ဖြစ်စေ တစ်တစ်နေ ့တစ်ခြား အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးပြီး ဝလာပါစေ မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်အလေးချိန် မိမိကိုယ်တ်ုိင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီမျှသော စားသောက်နေထိုင်လေ့ကျင့်မည်ဆိုပါက ကိုယ်အလေးချိန်ဝိတ်များ တက်လာခြင်း ကင်းဝေးပါလိမ့်မည် ။
ဦးစွာ မိမိဘာကြောင့် ဝလာသလည်းဆိုတာ သိရှိဖို ့အတွက် စားသုံးနေသည့် အစားအသောက်များကို ဦးစွာတွက်ချက်ပြီး နေထိုင်သည့် အလေ့အကျင့်ကိုလည်း သိရှိရပါလိမ့်မည် ။ အထိုင်များသော အလုပ်လုပ်သူများအတွက် တစ်နာရီခန် ့ထိုင်ချိန်ကြာလာပါက ၅ မိနစ်ခန် ့ထပြီး လမ်းလျှောက်ပေးခြင်း လုပ်ဆောင်ပေးဖို ့လည်း လိုအပ်သလို စားသောက်သည့် အစားအစာများကိုပါ တွက်ချက် မိမိသိရှိပြီးတော့ အစားအသောက်များကို ချင့်ချိန်စားသောက်မယ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားတစ်ခုလည်း တွဲဖက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် သင့်အနေဖြင့် သိသိသာသာ ဝိတ်ကျလာခြင်း ခန္ဓာကိုယ်စစ်ပြီး ကျန်းမာလန်းဆန်းလာပါလိမ့်မည် ။ ဝဝ လာတယ်ဆိုပြီး စိတ်ပျက်စရာလုံးဝ မလိုပါဘူး ။ မိမိသိရှိပြီး စားသောက်မယ် နေထိုင်မယ် လေ့ကျင့်မယ်ဆိုပါက တက်လာနု်ိင်သော ဝိတ်တွေလည်း ရပ်တန် ့ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်မက ပိုမိုသွယ်လျ ခန္ဓာကိုယ်အလှ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မည် ။
ကဲ.. ဒါဆို ဘယ်လို ဝိတ်ချမလည်းဆိုတာကတော့ ဦးစွာ မိမိဆန္ဒစော စိတ်လည်း မလောပါနဲ အဲလို စိတ်လောလို့စားသုံးသင့်သည့် အစားအစာလည်း မစားမသောက် လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေလုပ် အဲလို လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေက ရင်တွေတုန်တက်ခြင်း မူးဝေနောက်တက်ခြင်း ခြေထောက်တွေနာခြင်း ခြေအဆစ်တွေရောင်ရမ်းလာခြင်း ဒူးဆစ်တွေနာခြင်း ထိုင်ထအတွက် ခက်ခဲမှု ့တွေပါ ဖြစ်ပေါ်လာတက်ပါတယ် ။ အဲလိုမျိုးမဖြစ်အောင် နေ ့စဉ်ပုံမှန်သာ သွက်လက်စွာ လမ်းလျှောက်ပေးခြင်း ၊ ပြေးခြင်း အကြောလျှော့ခြင်းကို မိမိလှုပ်ရှားနိုင်သည့် အနေအထားဖြင့်သာ လုပ်လိုက်ပါ ဒီနေ ့တော့ ပိုပြေးတယ် ပိုလမ်းလျှောက်တယ် မလုပ်ရပါဘူး ပုံမှန်အနေအထားနဲ့ကိုယ့်လက်လှုပ်ရှား အားကစားတစ်ခုအဖြစ်သာ လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ ။ တစ်ပတ်ကို တစ်ရက် အနားယူလို ့ရပါတယ် ။ နေ ့စဉ်အတွက် ဝိတ်မတက်စေရန် ဆောင်သင့် ရှောင်သင့် သိသင့်သည့် အချက်တစ်ချို ့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက သိသိသာသာ ဝိတ်ကျ လှပခန္ဓာ ကျန်းမာစွာ ရှိပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချင်သူများ သိရှိသင့်သည်မှာ ………
(၁) အစားသောက်အတွေ မစားခင် ရေကိုဝဝ သောက်ပေးပြီးမှ စားသောက်ပါ အဲလို ရေသောက်ပြီး စားသောက်သည့်အတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချမှု ့အတွက် အလွန်အထောက်အကူပြု ့သလို ဆက်လျက်တက်လာမည့် ဝိတ်အတွက်ပါ ထိန်းသိမ်းရာလည်း ရောက်ပါသည် ။
(၂) အဆီနည်းသော အစားအစား အသားများကို စားရပါမည် ။ သင့်အတွက် မနက်စာကို ပုံမှန်အတိုင်း စားသောက်နိုင်ပါသည် ။ နေ ့ခင်းနဲ့ညစာကိုတော့ လျော့စားရပါလိမ့်မည်် ။ ညစာကိုတော့ ထမင်း အစား ဆန်ပြုတ်ကို စားသောက်ပေးပါက ပိုမို ကောင်းမွန်တာကို တွေ ့ရှိရပါသည် ။
(၃) စားသုံးသင့်သည်မှာ အသားများကို ပြုတ်ပြီး စားသောက်ခြင်း ၊ ငါး ၊ အသီးအရွက် ပြုတ်များ ၊ ပဲပင်ပေါက် ၊ ပဲနီလေး အစရှိသည့် ပဲအမျိုးမျိုး ၊ သစ်သီးဝလံများ ၊ ဆန်ပြုတ် ၊ ဂျုံကြမ်း ၊ တရုတ်နံနံ ၊ ကန်စွန်းရွက် ၊ ဂျင်းနှင့် ကြက်သွန်ဖြူပါသော အသီးအရွက်အကြော်စုံ ( ဆီအနည်းငယ် ဖြင့်သာကြော်ထားခြင်း ) စားသောက်ပေးပါ ။
(၄) ရေများများသောက်သောက်ပေးပါ ။
(၅) နေ ့ခင်းပိုင်းနှင့် ညနေ ညပိုင်း တို ့တွင် အသီးဖျော်ရည်အဖြစ် သောက်သုံးသင့်သည်မှာ ဂရိတ်ဖရုသီး ၊ ထောပတ်သီး ၊ သံပုရာရည် ၊ နာနတ် ၊ လိမ္မော် ၊ စတော်ဘယ်ရိီ အစရှိသည့်တို ့သောက်သုံးပေးပါ ။
(၆) ရေနွေးကြမ်း နှင့် ဘလပ်ကော်ဖိီ (သကြား မလိုင် မပါသော ) သောက်ပေးခြင်းသည် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းကိုထိန်းနိုင်သည့်အပြင် ကျဆင်းခြင်းအတွက် များစွာ အထော်အကူပြု ့ကျဆင်းစေပါသည် ။
ရှောင်သင့်သည့် အချက်များမှာ …….
(၁) စိတ်ဖိဆီးခြင်းများကိုလျှော့ချပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျရမည်ဆိုတာ ယုံကြည်စိတ် အပြည့်အဝထားပါ ။
(၂) မိမိစားသောက်သည့် အစားအစာများတွင် ကယ်လိုရီပမာဏ မများအောင် ထိန်းသိမ်း စားသောက်ပါ ။
(၃) ဝိတ်ကျစေလိုသည့် စိတ်ကြောင့် စိတ်လောစွာဖြင့် ပြင်းထန်းစွာ ကိုယ်လက်ရှားခြင်းများ မပြု ့လုပ်ဘဲ မိမိအနေဖြင့် နေ့စဉ်ပုံမှန်အနေအထားဖြင့်သာ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ ။
(၄) ညစာကို လုံးဝ မစားသောက်ဘဲ နေထိုင်ခြင်းမျိုးကို ရှောင်ရှားပါ ။
(၅) ရေကိုဦးစွာ မသောက်ဘဲ အစားအစာ စားသောက်တက်ခြင်းအလေ့အကျင့်ကို ရှောင်ရှားပါ ။
(၆) ဝိတ်ကျသွားပြီ ဒီလောက်ဆိုရပြီ တော်ပြီဆိုပြီး မူလအတိုင်း အစားအစာများကို စားသုံးတက်ကြခြင်းကို ပြု့လုပ်တက်ကြလို့ အဲလို မပြု့သင့် ရှောင်ရှားသင့်ပါသည် ။
မစားသုံးသင့် အစားအစာများမှာ …………
(၁) အဆီဓာတ်များသော အစားအစာများ ၊ ပြည့်ဝဆီများပါဝင်သော အစားအစာများ ၊ အချိုလွန်ကဲသော မုန် ့သရေစာများ စားသောက်တက်ခြင်း ရှောင်ပါ
(၂ ) ဂက်စ်ပါသော အချိုရည်များ ၊ အသားတု အစားအစာများ နှင့် တာရှည်ခံအောင် ပြု ့လုပ်ထားသော အစားအစာများကို ရှောင်ပါ ။
(၃) အငန်များသော အစားအစာများ ရှောင်သင့်ပါသည် ။
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချချင်သူများအပြင် ကျန်းမာရေး အသိဖြင့် စားသောက်နေထိုင်ချင်သူများအတွက်ပါ အလေ့အကျင့်ဖြစ် လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက
ကိုယ်လက်ကျန်းမာပြီး ဝိတ်တက်လာခြင်းအဖြစ်မှ ကင်းဝေးပါလိမ့်မည် ။
ဆေးလိပ်က အမျိုးသား အင်္ဂါကို တိုစေ ..!
အမျိုးသမီးတွေ လျစ်လျူမရှု့သင့်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာ လက္ခဏာရပ် ၆ ခု